၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်းကိုမည်သို့ထုတ်လွှတ်သနည်း၊ နှင့် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။ အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ယနေ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသည်ဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၏စျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိနေသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုသည်မှာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမညစ်ညမ်းစေသည့်အပြင်စွမ်းအင်ကို အသုံးချ၍ နေ၊ လေ၊ ရေ၊ စသည်တို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုများ၏စွမ်းအင်ကိုအသုံးချနိုင်သောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကုန်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ကျနော်တို့နက်နက်နဲနဲစကားပြောမယ် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်။ ဤစွမ်းအင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးအများဆုံးစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို၎င်း၊ သူ၌မတူညီသောအသုံးပြုမှုများကိုသင်သိလိုပါသလော။
2 ဘယ်လို photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သလဲ?
4 photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု
4.2 photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအခြားအသုံးပြုမှု
၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုစတင်မဖော်ပြမီဖိုပိုလိတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်ကောင်းစွာမသိသေးသောသူများအတွက်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကြပါစို့။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အလင်းအမှုန်များမှနေစွမ်းအင်ကိုအသုံးချနိုင်သည် အရာအကြာတွင်လျှပ်စစ်မီးသို့အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သည်လုံးဝသန့်ရှင်းသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အပြင်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုလေထုထဲသို့မထုတ်လွှတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်ခြင်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနေသည်ကုန်သွားသည်မဟုတ် (အနည်းဆုံးနှစ်ဘီလီယံအနည်းငယ်အတွက်) ။
နေ၏စွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းရန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရောင်ခြည်မှအလင်းဖိုတွန်များကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။
ဘယ်လို photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သလဲ?
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း photovoltaic စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ဆိုလာဓါတ်ရောင်ခြည်ရှိအလင်း၏ဖိုတွန်များကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လျှပ်စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည် အဆိုပါ photovoltaic ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုအရေးပါသောဒြပ်စင်အဖြစ်ရှိပါတယ် photovoltaic ဆဲလ်။ ၎င်းသည်ဆီလီကွန်ကူးပစ္စည်း (ဥပမာအားဖြင့်ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော) ပစ္စည်းမလိုအပ်ဘဲရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ လောင်စာဆီသို့မဟုတ်ဆူညံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤ photovoltaic ဆဲလ်သည်အလင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ပါက၎င်းသည်အလင်း၏ဖိုတွန်တွင်ပါရှိသောစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပြီးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ photovoltaic ဆဲလ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစုဆောင်းထားတဲ့အီလက်ထရွန်တွေဟာစဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
photovoltaic ဆဲလ်များ၏ output voltage သည်အလွန်နိမ့်သောကြောင့် (၀.၆ ဗို့သာ)၊ ၎င်းတို့ကိုလျှပ်စစ်စီးရီးများထဲတွင်တပ်ဆင်ပြီးရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိဖန်ခွက်ပြားများနှင့်ရှေ့ရှိစိုထိုင်းဆကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အချိန်၏) အရိပ်၌တည်ရှိလိမ့်မည်။
photovoltaic ဆဲလ်များ၏စီးရီး၏ပြည်ထောင်စုနှင့်ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ coated တစ် ဦး photovoltaic module တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤအဆင့်တွင်သင်ထုတ်ကုန်ကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် ၀ ယ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုထားသောနည်းပညာများနှင့်အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားအရ၊ ဒီ module တွင်မျက်နှာပြင်0.1ရိယာသည် 10 m² (1 W) မှ 100 m² (12 W) ရှိသည်။ ပျမ်းမျှညွှန်ပြတန်ဖိုးများနှင့် 24 V, 48 V သို့မဟုတ် voltages ကိုကျဆင်းစေတယ်။ လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်၍ XNUMX V ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း photovoltaic ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့်စွမ်းအင်ကိုအလွန်နိမ့်သော voltage နှင့် direct current တို့တွင်ရရှိသည်။ ဒီစွမ်းအင်ကိုအိမ်မှာသုံးလို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့်နောက်မှ၊ ပါဝါအင်ဗာတာ ပြောင်းလဲနေတဲ့လက်ရှိသို့ပြောင်းလဲရန်။
Photovoltaic ဆဲလ်များတည်ရှိရာကိရိယာများကိုဆိုလာပြားများဟုခေါ်သည်။ ဤရွေ့ကားပြားမျိုးစုံအသုံးပြုမှုရှိသည်။ ၎င်းတို့အားပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဈေးထဲမှာယူရို ၇၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဤဆိုလာပြားများ၏အဓိကအားသာချက်မှာ ၄ င်းတို့တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ သူတို့သည်သက်တမ်း ၂၅ မှ ၃၀ အထိရှိသည်ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေတယ်။
ဤဆိုလာပြားများကိုမှန်ကန်သောနေရာ၌တပ်ဆင်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်နေ့လျှင်နေရောင်ခြည်အမြင့်ဆုံးနာရီကို ဦး တည်သည့်နေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ၏စွမ်းအင်ကိုအများဆုံးအသုံးချပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဆိုလာပြားသည်ဘက်ထရီလိုအပ်သည် နေရောင်မရှိသောအခါ (ဥပမာညအချိန်၌သို့မဟုတ်မိုးအုံ့။ မိုးရာသီတွင်) ထိုနာရီများ၌အသုံးပြုရန်ထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ထားသည်။
Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတပ်ဆင်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုလာပြားများ၊ နေရာချထားခြင်းနှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ပထဝီဝင်အနေအထားအပေါ်လုံးလုံးမူတည်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ထိုဒေသတွင်နေရောင်ခြည်ပိုများလေလေစွမ်းအင်ထုတ်လေလေဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကိရိယာအများစုသည် ၈ နှစ်ခန့်တွင်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည် အကယ်၍ ဆိုလာပြားများ၏အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းသည် ၂၅ နှစ်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သူ့အတွက်ပေးဆပ်ရသည့်အပြင်အမြတ်အစွန်းများများရရှိသည်။
Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအဓိကအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာ photovoltaic အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများမှထုတ်လုပ်သောစဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်ဇယားကွက်အတွင်းသို့ပြောင်းလဲရန်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်လက်ရှိအင်ဗာတာတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တစ် kWh နှုန်း ၎င်းသည်အခြားမျိုးဆက်စနစ်များထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ ဒီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအများကြီးပြောင်းလဲသွားပေမယ့်။ နေရောင်ခြည်၏နာရီအရေအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအချို့သောနေရာများတွင် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုထေမိစေရန်သင်၏ဘဏ္financialာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအထောက်အကူများလိုင်းများရှိရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အားညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရန်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ကူညီပေးနေသည်။
illumination ။ photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအခြားအသုံးပြုမှုမှာကျေးရွာဝင်ပေါက်များ၊ အနားယူရာနေရာများနှင့်လမ်းဆုံများ၌အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အလင်းရောင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း။ ဒီစွမ်းအင်ကိုအခါအားလျော်စွာ mobile power repeaters၊ radio နှင့် television တွေမှာသုံးပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်မီး။ ဗဟိုစနစ်၏အကူအညီဖြင့်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့များနှင့်ကျေးရွာငယ်များသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရရှိနိုင်သည်။
လယ်ယာနှင့်မွေးမြူရေး။ ဤဒေသများရှိစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကိုထွန်းလင်းရန်၊ နို့သောက်ရန်အတွက်စသည့်ရေနှင့်ရေသွင်းစုပ်စက်များမောင်းနှင်သည်။
သင်မြင်တွေ့ရသောအတိုင်းဆိုပါက photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစျေးကွက်များ၌ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစွမ်းအင်နှင့်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသောနေရာများစွာတွင်အသုံးပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် » ၎င်းသည်ဘာလဲ၊ မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်နှင့် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသနည်း